Arabia Saodita · Novambra, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Arabia Saodita · Novambra, 2013
Tantara mikasika ny Arabia Saodita tamin'ny Novambra, 2013
Fivavahana 24 Novambra 2013
Niha-nafàna ny adihevitra momba ny olana amin'ny fanagadrana tsy amin'ny antony taorian'ny fandaharana resadresaka notontosain'ny fahitalavitra Saodiana malaza MBC niarahana tamin'i Walid al- Sunani. Fantaro ny antony
Orana Naha-dobo Rano An'i Riyadh Renivohitra Saodiana
Mediam-bahoaka 18 Novambra 2013
Maro no naneho hevitra hoe nahoana no firenena iray manan-karena tahaka an'i Arabia Saodita ka enfa dia tsizarizary ny fotodrafitrasa, tsy afaka hiatrika orana akory, taorian'ny nahatondraka rano ny renivohitra Saodiana.
Afrika Mainty 14 Novambra 2013
Fivavahana 05 Novambra 2013
Niteny tamin'ny alàlan'ny gazety Al Hayat i Shaikh Ali Al Hekmi, ilay Saodiana tampom-pahaizana amin'ny resa-pivavahana fa tsy azon'ny zanak'olombelona haleha ny planeta mena. Tapa-tsinay ireo mpisera ao amin'ny aterineto.
Arabia Saodita: Nosamborina Ilay Mpanoratra Nanohana Ireo Vehivavy Mpitondra Fiara
Fahalalahàna miteny 03 Novambra 2013
Enina andro lasa izay dia nosamborina noho ny fanehoany ny fanohanana ny zon'ny vehivavy ao amin'ny fireneny hitondra fiara ny mpanoratra Saodiana iray. Ankehitriny ny mpiserasera no mitaky ny famotsorana azy.
LAHATSARY: Lehilahy Saodiana Namono Mpiasa “Niresaka Tamin'ny Vadiny”
Emirà Arabo Mitambatra 02 Novambra 2013
Niparitaka tamin'ny aterineto ny lahatsary iray ahitana lehilahy Saodiana midaroka mpiasa vahiny, niteraka fahatezerana noho ny fanararaotana ireo mpiasa ao amin'ny firenena izany.